I-Kombuha-tea - indlela engcono kakhulu yokususa amagesi nama-slags emzimbeni
Ulwazi olufushane ukuthi noma yiliphi umdayisi wetiyi angakunika igama elingavamile elithi "kombuha":
• Kususa ama-slags kanye negesi emzimbeni kahle.
• Ukuphumelela ezifweni ze-metabolism, njenge-rheumatism, igciwane lesisu, isisu nesisu.
• Kunciphisa izinga lamafutha ne-uric acid, okuvimbela izifo ezifana ne-gout kanye ne-atherosclerosis.
I-Kombuha-tea - indlela engcono kakhulu yokususa amagesi kanye nemfucuza emzimbeni. Namuhla emakethe omnyama we-piece encane ye-kombucha icela ama-euro angama-75, kodwa ikhwalithi yale teyi ayinakuzaza. Ngakho-ke, kungcono ukuthenga i-kombucha ekhemisi. Emaphaketheni yetiyi enjalo kumele kuboniswe inombolo yocingo kanye nekheli lomkhiqizi.
Esinye sezici eziyinhloko zokwelapha kombuha-itiye ukuthi ivuselela amasosha omzimba.
Ngokumelene nezifo ezithathelwanayo i-kombuha yenza ngokungaqondile: iqinisa ukugaya, isebenze umsebenzi wesisu namathumbu, isusa amagesi nama-slags emzimbeni.
Igama le-kombucha-itiye linikezwa egameni lesikhulu saseKorea uKombu, okushiwo, ngo-400 AD. e. waphulukisa umbusi waseJapane we-gastritis, wamphatha ngesiphuzo esikhethekile iKombu-Ha. Le teyi yaziwa nakwabaseChina njengesiphuzo sokwelapha.
E-Russia, i-kombucha itiye ibiwa isikhathi eside. Ngemuva kweMpi Yezwe Yomhlaba, wafika eJalimane ngamasosha ayebuya ekuthunjweni. Ezincwadini zesayensi le teyi yaqala ukukhulunywa ngo-1913, kodwa yaba yinto ethandwa kakhulu kuphela ngo-1964 ngenxa yencwadi kadokotela waseJalimane uRudolf Sklenar. I-Sklenar yayisebenzisa ukusebenzisa i-kombuha-tea yokwelashwa kwezifo zokuxilonga, i-rheumatism, i-gout, izifo zesisu namathumbu, kanye nokunciphisa izinga le-uric acid ne-cholesterol emzimbeni.
Ukuphulukisa izakhiwo kombuha-tea kuyinto enkulu kakhulu. Kodwa isenzo se-kombucha-tea sibonakaliswe yizifundo eziningi, kodwa akukho lutho oluhle kulokhu. I-Kombuha-tea ikhiwa, eqinisweni, kusuka emithathu imvubelo yefungi kanye nezinhlobo ezine zamabhaktheriya. Into yayo ebaluleke kakhulu yokwelapha i-glucuronic acid, ebopha emzimbeni womuntu ngama-poisons kanye nobuthe futhi uyayifaka emcinini. Ngaphezu kwalokho, i-kombucha-itiye iqukethe i-vitamin C eminingi, i-acetic ne-lactic acid kanye nesamba esincane (ngaphansi kwe-1%) yotshwala.
E-Russia, i-kombucha tea ithandwa ngokuyinhloko njenge-diuretic yasekhaya, ikakhulukazi uma igula i-gout. Abanye odokotela baseJalimane bakholelwa ukuthi uvuselela umsebenzi wezigulane ze-endocrine. Ngakho-ke i-kombuha-tea iwusizo ezifweni ze-metabolism, i-muscle acidification kanye nesisindo esiningi, kanye nokwehlisa amandla nokukhathala. Kodwa-ke, ukuba khona kwesamba esikhulu soshukela kwenza ukusetshenziswa kwawo kungathandeki kubantu abashukela ngesifo sikashukela.
I-Kombucha itiye iwusizo ngokuyinhloko ngoba isusa amagesi, amafutha ne-uric acid emzimbeni, normalizing imifino yamathumbu. Leli yindawo ebalulekile yokwelashwa ekwelashweni komdlavuza, kanye nokuvimbela ukuqina kwesifo somzimba nokugaya.
Ungayilungisa kanjani i-kombucha-tea?
Ukulungiselela i-kombuha-itiye uzodinga 1 ilitha lamanzi, 1 g weti elimnyama noma elihlaza, 50 g ushukela, u-1 piece we-kombucha-enzyme.
Ubilise amanzi, ubeke itiye, i-kombuha-enzyme kanye noshukela ekomishini, uthele amanzi abilayo bese uvumela imizuzu engu-10-15 ukuphuza. Gwema bese uhamba ngokusebenzisa i-strainer yetiye, bese uthela itiye embizeni ehlanzekile engilazi.
Ukumboza nge-saucer bese upholile ukushisa kwekamelo, bese umboza imbiza nge-gauze, uyibeke nge-band elastic. Indwangu izovikela itiye othulini nezinambuzane, okuheha iphunga elimnandi. Ngaphezu kwalokho, i-kombucha-enzyme kumele "iphefumule," okungukuthi, thola i-oxygen.
Beka umkhumbi endaweni enomoya omuhle ngezinsuku ezingu-8-12. I-tea izobe isilungele ukusetshenziswa uma iba mhlophe emhlophe futhi ngokulinganisela. Okokugcina, susa ukhunta wetiyi kusuka ketshezi bese usihlanza emgqonyeni ngaphansi kwamanzi okugijima ukuze ugcine kuze kube sekugcineni. Gwema itiye bese uwuthululela emabhodleleni. Ngakho, ungayigcina emakhazeni amasonto ambalwa.
Ukuze ususe ama-slags nama-gesi, kutuswa ukuba uphuze ama-0.5 amalitha we-kombucha-tea nsuku zonke. Le mali ihlukaniswe ngezigaba ezintathu futhi idakiwe ekuseni ngesisu esingenalutho, ntambama nakusihlwa ngesabelo esisodwa. Ukuze uthole umphumela wokudla, kufanele uphuze u-0.25 amalitha weti njalo amahora amane.
Ukwelashwa nge-bioresonance therapy
Ukubhekana nokucindezeleka okulindeleke kuyo yonke indawo
Izidakamizwa zingathinta kanjani ukukhulelwa kwengane?
Kuziphi izifo i-sea-buckthorn ewusizo?
Indlela izinso eziphunga ngayo: izimpawu ezivamile
Ukuhlela nokubalwa kwamahora okusebenza
U-Yana Rudkovskaya uthola ku-Buzovaya, ividiyo
Iklabishi elayishiwe eTransylvanian
Kungani indoda idinga ukwazi ukuthi intombi yakhe idlulile
Umlingisi omkhulu Alexander Porohovshchikov
I-Psychology: okufanele ukwenze uma ufuna ukushada
Izidakamizwa zokulahlekelwa isisindo - ngokushesha futhi ngokuphepha?
Yini ebhekwa njenge-aphrodisiac engcono kakhulu?
I-Cranberry emithi yomuthi